Ngomhla wama-2021-eyaseYurophu yeNombolo ye-1 yeBhokisi yeBhokisi
Archives Monthly: Matshi 2021
31 EyoKwindla 2021
UMarion Palatin wonyule uSekela Mongameli we-WBO Yurophu
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UMarion Palatin, WBO, Umbutho wamanqindi weHlabathi	0
Umbutho wamanqindi wehlabathi uqeshe uMarion Palatin njengoSekela Mongameli we-WBO Yurophu izolo. Uza kuphumelela owayesakuba yintshatsheli u-Istvan 'Koko' Kovacs, owayebambe esi sikhundla ukusukela ngo-2004. UPalatin uzakuligqiba ixesha likaKovacs, nelizokuphinda linyulwe kunyulo jikelele lweKomiti Elawulayo ye-WBO, elungiselelwe indibano yalo nyaka.
Ilungu leKhomishini yomdlalo wamanqindi yase-Austrian kunye nomkomishinala onamava wamanqindi kunye nomphathi, u-Palatin kungoku nje ungumququzeleli we-WBO wase-Bhokisana wabasetyhini.
“UMarion yingcali yamanqindi ekumgangatho wokuqala kwiKhomishini yezeManqindi yaseAustria. Uthetha isiJamani nesiNgesi ngokutyibilikayo, unolwalamano olukhulu namanani omdlalo wamanqindi kwiYurophu iphela nakwihlabathi jikelele, kwaye ukulungele ukufumana isikhundla sakhe esitsha ”, utshilo uMongameli weWBO uFrancisco 'Paco' Valcárcel, u-Esq. malunga nePalatin.
I-Olimpiki yamaxesha amabini (ibronze e-Barcelona 92, igolide e-Atlanta 96) kunye ne-WBO 126 lbs. I-World Champion ngo-2001, i-Kovacs yayiyinxalenye ebalulekileyo ye-WBO kule minyaka ingama-20 idlulileyo kunye nommeli omkhulu wezemidlalo. Kwangoko kulenyanga wanyulwa njengo-Nobhala Jikelele we-AIBA (Umbutho waMazwe ngaMazwe wase-Boxe Amateure / we-Amateur Boxing Association) kwaye uzakusebenza nzima kunye nabadlali be-amateur kwikamva elibonakalayo.
I-Kovacs '' isabelo sokugqibela njengelungu leKomiti Elawulayo ye-WBO iya kuba liliso kwi-WBO 130 lbs. Ukhuselo lweNtshatsheli yeHlabathi uJamel Herring ngokuchasene nowayengumbhali wehlabathi uCarl Frampton ngalo Mgqibelo e-Dubai, e-United Arab Emirates.
“UKoko ngumhlobo wam osenyongweni, kwaye waba negalelo ekukhuleni kweWBO eYurophu. Ndiqinisekile ukuba uzakuphumelela kakhulu kwilinge lakhe elitsha ne-AIBA, ”wongeze watsho uValcárcel.
Iimbaleki zeWBO zeHlabathi uTim Tszyu woyiswa nguDennis Hogan e-Australia
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UDennis Hogan, UTim Tszyu, Tszyu vs. Hogan	0
Umntu wase-Australia ungoyena mntu ulwela ibhande le-WBO Jr. Middleweight belt.
UTim Tszyu (18-0, 14 KOs) wabetha uDennis Hogan (28-4-1, 7 KOs) ngokumiswa komjikelo wesihlanu ngoLwesithathu e-Australia.
I-Australia yalahla uHogan, kwaye yaqhubeka nomhlaba onzima de inkampu kaHogan yaphosa itawuli ngemizuzwana eseleyo yomjikelo.
U-26-oneminyaka ubudala ugcinile isihloko sakhe se-WBO Global kwaye wafudukela kwirekhodi le-18 ephumeleleyo kunye nelahleko zero, kwaye kungekudala angazifumana elwa nemilo ephambili yesihloko.
U-Tszyu woyisa imbangi yakhe eyazalelwa eIreland ngokudubula rhoqo emzimbeni, kwaye ekugqibeleni bayithumela kwibala lesithandathu ngaphambi kokuba ikona kaHogan inikezele.
Sele ebekwe kwindawo yokuqala njengeqela eliphikisayo yi-WBO, ngoku angazama ukufumana umzabalazo ophethe isihloko uBrian Castano.
"Ndiyibonile ukusuka kumjikelo wesibini," utshilo ophumeleleyo emva komlo. “Besisazi ukuba sineminye imijikelo esixhenxe, esibhozo ngoko ke sizihambisile. Kuyatshona okanye ukuqubha saza saqubha.
"Ubungangamsha bendichasene naye, umlingisi ophumelele amatyeli amabini endiphume apho ngokukhawuleza kuno [Jermall] Charlo- hayi impumelelo embi, utshilo uTsyu, ngoku ofuna ukubuyisela ibhanti e-Australia.
"Sifuna imitya yokwenyani," utshilo uTsyu. "Kwaye siyabafuna apha e-Australia."
UDevin 'Iphupha' Haney lokuKhusela iTayitile ngokuchasene noJorge Linares ngoMeyi wama-29
UDevin 'Iphupha' uHaney uyakukhusela isihloko sakhe seWBC World Lightweight ngokuchasene noJorge Linares eMichelob ULTRA Arena eMandalay Bay Resort naseCasino eLas Vegas ngoMgqibelo, nge-29 kaMeyi. Lo msitho uzakudlalwa emhlabeni jikelele kwi-DAZN ngokudibene neDevin Haney Promotions kunye Ukunyuswa kweGolden Boy.
Ulwazi lwetikiti, kubandakanya iinkcukacha zentengiso kunye namaxabiso, kunye nekhadi eliphantsi liza kukhutshwa kungekudala.
Ukukhanya kuya kuba ku-Haney (25-0, 18 KOs) ngeSikhumbuzo seveki yeSuku njengoko ebeka ibhanti lakhe emgceni okwesihlandlo sesithathu, ngeli xesha ethatha uLinares oza kubonelela olona vavanyo luqatha kwiitalente ezityebileyo zentshatsheli. Inkwenkwana eneminyaka engama-22 ubudala iya kwenza ibhokisi kwiyadi yakhe eseLas Vegas okwesihlandlo sesithathu kwikhondo lakhe lomsebenzi kunye nexesha lakhe lokuqala ukusukela ukuphuma kwakhe kwesithandathu ngoMeyi 2016.
'Iphupha' laphakanyiselwa ukuba yintshatsheli yeHlabathi emva kokuphumelela u-KO ophumelele uZaur Abdullaev eNew York ngoSeptemba 2019. Uye wakhusela ibhanti lakhe kabini ngokuphumelela u-Alfredo Santiago ngo-Novemba ngo-2019 kunye no-Yuriorkis Gamboa ngo-Novemba olandelayo.
“Ndonwabe kakhulu ukwenza isihloko sam sesithathu sehlabathi kukhuselo lomlo omkhulu njengoJorge Linares, oyakuba lelona qhawe liphezulu endakhe ndadibana nalo ebomini bam,” utshilo uHaney. “Uyintshatsheli eyahlulahlulwe kathathu eyalwa kwinqanaba lobuntshatsheli kule minyaka ilishumi elinesithathu idlulileyo.
“Ndikhule ndibukele uLinares kwaye into yokuba lo mlo wenzeka eLas Vegas yinto engakholelekiyo. Abalandeli bamanqindi kwihlabathi liphela banomdla wokundibona ndinyusa ukhuphiswano, kwaye ndiyazi ukuba uLinares uza kulwa. Ndikulungele ukunika abalandeli ukusebenza okumangalisayo. Ukhuphiswano olungcono luzisa okona kulungileyo kum. Ngokuchasene neLinares, ndiza kubonisa umhlaba ukuba kutheni ndiyinkosi yecandelo leLightweight. ”
I-Linares (i-47-5, i-29 KOs) ijonge ukuba ngumgcini weWBC izihlandlo ezibini awaphumelela ngoDisemba 2014 ngokuchasene noJavier Prieto. Umlo waba ngumtsalane kwimbaleki yeminyaka emine apho i-ace yaseVenezuela yabetha uKevin Mitchell, u-Ivan Cano, u-Anthony Crolla amatyeli amabini, u-Luke Campbell kunye no-Mercito Gesta njenge nkosi ye-Lightweight ngaphambi kokuba ajongane no-Vasiliy Lomachenko e. ENew York ngoMeyi 2018.
Umntu oneminyaka engama-35 ubudala uthatha uHaney kumlo wakhe we-15th isihloko somlo kunye ne-53rd bout ngaphezulu kweminyaka ye-18 njenge pro. U-Linares ukholelwa ukuba zininzi ezinye izahluko ezibhaliweyo kwikhondo lakhe lomsebenzi.
U-Linares uthe, “Lo ngumzuzu wam wokubonisa umhlaba ukuba ndisenokuninzi ekunokunikwa ngeeponti ezili-135. UDevin Haney ngumfana onesiphiwo kwaye okhawulezayo, kodwa xa ndandimdala, ndandisele ndiyintshatsheli ngokuhlutha isihloko kude kwimbaleki yokwenyani efana no-Oscar Larios. Kwaye ngoku unokucinga ukuba angakanani amava endinawo ngoku kubudala apho ndiziva ndomelele kwaye ndibhetele kunangaphambili. ”
“Ngaphandle kwamathandabuzo iyakuba ngumlo omkhulu, kodwa ndizakubonisa ukuba uHaney wenze impazamo enkulu ngokwamkela umceli mngeni angakulungelanga ukuwoyisa.”
Umququzeleli u-Eddie Hearn uthe, “Lo ngumlo ozakuphuma uzakubonisa umhlaba ukuba uDevin Haney ngoyena mntu ulula kakhulu emhlabeni. UJorge Linares yimbaleki ebalaseleyo, inkosi enobunzima obuthathu enejubane, amandla kunye namava amaninzi. ”
“Ndimele amaqela amane okulwa athe azama ukubetha uJorge kodwa akaphumelela, kodwa kweli xesha ndikholelwa ekubeni sinoKumkani wecandelo elizayo eDevin, kwaye lo ngumzuzu wakhe. Ngomhla wama-29 kuCanzibe, izibane eziqaqambileyo zeMandalay Bay eLas Vegas, ngulo mzuzu lo. ”
U-Oscar De La Hoya, uSihlalo kunye ne-CEO yeGolden Boy, uthe, “Sisebenze noJorge Linares ixesha elide kwaye nangaliphi na ixesha ekuthiwa ziingcali zimbalela, ubuya nempindezelo. UHaney akazange akhe ahlangane nomnye umntu nokuba sele ekufutshane nenqanaba lezakhono zikaJorge, kwaye kuma-135, usengamandla okuthathwa kuye nabani na okweli candelo. ”
UGeorge Kliavkoff, uMongameli wezoLonwabo neMidlalo kwi-MGM Resorts International, uthe, “iMandalay Bay inxibelelene nomdlalo wamanqindi isithuba esingaphezulu kwamashumi amabini eminyaka kwaye sijonge phambili ekuqhubekeni nesiko namaqabane ethu omnyhadala. Ithuba lokusingatha umlo onje, kwaye ngokwenza oko ngokukhuselekileyo, lelinye inyathelo ekubuyiseleni imisitho yobuntshatsheli kwiSports Capital yeHlabathi. ”
Ulwazi lwetikiti lomnyhadala wamanqindi weHaney vs Linares eMichelob ULTRA Arena eMandalay Bay, kubandakanya iinkcukacha zentengiso kunye namaxabiso, kunye nekhadi eliphantsi liza kukhutshwa kungekudala.
UDillian Whyte: "Akukho mntu unokumelana nePunch yam kwaye eme phezulu"
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Alexander Povetkin, UDillian Whyte, IPovetkin vs Whyte 2	0
IBhunga lethutyana leBhokisi yezeManqindi yeHlabathi yezeMidlalo yoBunzima kuDillian Whyte ekugqibeleni wakwazi ukuziphindezela ngenxa yoloyiso lwangonyaka ophelileyo kwiRussia Alexander Povetkin.
NgoMgqibelo ophelileyo, e-Europa Point Sports Complex e-Gibraltar nasemva kokumiswa kwamva nje kwe-Povetkin kuvavanyo lwe-coronavirus, i-Briton khange ishiye kwamathandabuzo ngokugqwesa kwakhe ukuqala komlo kude kube ngumjikelo wesine ophele kuwo.
Lo ngulowo umndululeyo wagoduka. Boom! Akukho mntu unokumelana nenqindi lam kwaye ame. Akukho namnye! Nabani na obetha ngesitshixo sasekhohlo kufuneka ehle Ngamanye amaxesha banokuphakama, kodwa baya kwehla, utshilo u-Whyte kudliwanondlebe neSky Sports.
Kwaye ekhumbula ukoyiswa ngo-Agasti wonyaka ophelileyo, wathi: “Ndisakhathazekile. Ixesha lokuqala bekungafanelekanga ukuba ndilahlekile. Ndizicaphukele nje ngokulahlekelwa lixesha lokuqala. Into ekufuneka uyenzile kukufumana ubukrelekrele kancinci, kuphelele apho. Ndenze impazamo kwaye ndayihlawula. "
U-Whyte unethemba lokuba kungekudala uza kujongana neqela eliphambili le-WBC, naye u-British Tyson Fury.
UKatie Taylor vs Natasha Jonas ngoMeyi woku-1
NgoMgqibelo ngoMeyi 1, kwindawo eza kuchazwa e-United Kingdom, intshatsheli engenakuphikiswa, uKatie Taylor (17-0, 6 KOs), uya kujongana nomlobi onobuchule uNatasha Jonas (9-1-1, 7 KOs) kulindeleke ukuba ibe ngumlo omkhulu.
UTaylor woyisa uJonas kwikota yokugqibela yeeOlimpiki zaseLondon ngo-2012. La magorha mabini ngoku aza kujongana phantse neminyaka elishumi kamva.
UTaylor, odityaniswe njengomnye wabalwi abaphambili emhlabeni, usandula ukubetha uMiriam Gutiérrez kumlo wakhe wokugqibela, ngo-Novemba.
UNatasha, kwelakhe icala, wasondela kakhulu ekuphumeleleni intshinga yakhe yokuqala yehlobo ngehlobo ephelileyo xa wayetsala intshatsheli yeWBC super featherweight uTerri Harper kumlo olunge kakhulu.
Lo mboniso ukhuthazwa yiMatchroom Boxing, uza kuboniswa kumabonwakude eSky Sports e-UK nakwi-DAZN.
I-Kazakh Tursynbay Kulakhmet vs Hever Rondon ngalo Mgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UHever Rondon, Kazakh Tursynbay Kulakhmet, Kulakhmet vs Rondon	0
I-Kazakh Tursynbay Kulakhmet iya kujongana neVenzuelan Hever Rondon eKesars Palace e-Dubai ngo-Epreli 3.
Omabini la majoni awahluthwanga kodwa iirekhodi zawo zahluke kakhulu. I-Kulakhmet ineempumelelo ezimbini zobungcali kodwa umsebenzi obalaseleyo kunye nexesha elide lomsebenzi. URondón uphumelele i-20 ngaphandle kokwazi ukohlula
Kulo mdlalo ubambe isandla sasekhohlo, isihloko seWorld Boxing Council's super welterweight siza kuba sengozini.
Ngale mini: UMarvin Camel waba liQela le-WBC Cruiserweight
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Inkamela vs. Parlov, UMarvin Camel, Umlingane Parlov	0
Matshi 31, 1980
U-American Marvin Camel waba yintshatsheli yokuqala ye-WBC cruiserweight kwimbali (icandelo elalisandula ukwenziwa ngelo xesha liBhunga lezeManqindi yeHlabathi), loyisa uMate Parlov waseCroatia ngesigqibo esifanayo, kumlo owawusehotele. Ibhotwe likaKesare eLas Vegas, eNevada. Usompempe yayinguFerd Hernandez nanjengoko iijaji uHarold Buck, uJosé Juan Guerra kunye no-Angelo Poletti besebenza.
I-GAB yenza umohluko kunye nomdlalo wamanqindi kwiiPhilippines
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UAbraham Kahlil B Mitra, Baham, IGAB, Imidlalo kunye neBhodi yoKonwabisa	0
UAbraham Kahlil B Mitra, onguSihlalo weBhodi yeMidlalo kunye neBhodi yoKonwabisa (i-GAB) ePhilippines, ungoyena mntu uphambili ekuphuhliseni umdlalo wamanqindi kunye nomxhasi oqinileyo we-Women's Boxing.
UAbraham obizwa ngegama elithi "Baham" ulilungu elixabisekileyo nelisebenza nzima kwiBhodi yeRhuluneli yeHlabathi yeBhokisi yoMdlalo weBhokisana. Ngexesha lakhe njengoSihlalo we-Oriental kunye nePacific Boxing Federation, eyaziwa njenge-OPBF, wanyusa kwaye wandisa ubulungu bayo, enceda ekuvuseleleni ukuthatha inxaxheba kweTonga, iTaiwan neGuam.
U-Abraham, owayesebenza njengeCongressman ukusukela ngo-2001 ukuya ku-2010, wasebenzisa amava ahlukeneyo nafumanekayo azuzwe njengeRhuluneli yePhondo lePalawan, ukunceda kulawulo lomdlalo wamanqindi, ngokusebenza ngokukuko, ukuqaphela iinkcukacha nokukhathalela okukhulu nobubele, nto leyo emenza ukuba umntu.
U-Abraham ukwancedile ukuququzelela iigranti ezivela kwiNgxowa-mali yeJoseph Sulaiman Boxers, eqiniswe yiGAB Boxing kwabanye beembethi manqindi eziwe phantsi kobunzima.
Enye yezona mpumelelo zibalulekileyo nezona zibalulekileyo ku-Abraham, yayikukunceda ukuba iNgqungquthela yaBasetyhini yeWBC. Eyokuqala ibibanjelwe ePlaya Del Carmen kwaye eyesibini ibiseTijuana, ekwiMexico.
Ke, yayilixesha lokuba esi siganeko sibalulekileyo kwaye sibalulekileyo sibekwe kwinqanaba lomhlaba jikelele. Kwi-2018, i-WBC`s Asia Summit ibibanjelwe eManila kwiiPhilippines, kwaye u-Abraham uthathe uxanduva lokuyidibanisa neNgqungquthela yesithathu ye-WBC yaBasetyhini, ngo-Novemba 16-19th UAbraham neQela lakhe baphumelele ngokumangalisayo, beququzelela lo msitho wamawele mkhulu kwaye uphumelele, besongeza kwenye into, kwaye yafezekiswa nge-panache kunye nobuchule obuhle bombutho obukhokelela kwimpumelelo.
Abathunywa abavela kwihlabathi lonke bahlala kwi-Sofitel Philippine Plaza. Babandakanya uMia St John, uMelisa St Vil, uAlicia Ashley, uMartha Salazar, uJelena Mrdjenovich, uFabiana Bytyqi, uFranchon Crews-Duzurn, uKenia Enriquez, uRaja Amasheh kunye noSulem Urbina kunye nabanye abalwa kwihlabathi liphela. Bebekhatshwa liqela labaphathi elichaza liphuhlise umdlalo wamanqindi wabasetyhini, othi:
Usihlalo weKomiti ye-WBC yoNtshatsheli yaBasetyhini uMalte Muller Michaelis, uJill Diamond onguNobhala we-WBC wamanye amazwe kunye noSihlalo we-WBC Cares kunye noChristiane Manzur onguSihlalo we-WBC Cares. Iiseshini zomsebenzi zemihla ngemihla ezazingqindilili, i-urbane, ehlekisa kakhulu kwaye inemveliso, zabanjwa kwiZiko leNgqungquthela leZizwe ngezizwe lasePhilippine.
Ingqungquthela yesithathu yeWBC yabasetyhini eManila yangqineka iyimbali ebalulekileyo. Izigqibo apho zincedile ekuphuhliseni umdlalo wamanqindi, kubandakanya idabi eliqhubekayo lokuphucula intlawulo yamanqindi amanenekazi, azinikeleyo, asebenza nzima kwaye ekhuphisana kakhulu, kodwa esoloko ebonisa ukuba ngumfazi kwezemidlalo. Ekupheleni kwemidlalo kunye nemincintiswano yobuntshatsheli amanqindi amanqindi amanqindi ayawolana kwaye avuyisana ngomlo olwelwe kakuhle ngentliziyo yokwenene. Umzekelo omangalisayo kuthi sonke kwezomdlalo wamanqindi.
Uthando lokuqala luka-Abraham lusapho lwakhe. Emsebenzini, uxanduva lwakhe lubandakanya yonke imidlalo ephambili kwiiPhilippines, kodwa enye yezinto zakhe ezintle kukuphuhlisa umdlalo wamanqindi. Eli lizwe liperile yomdlalo wamanqindi eAsia. Ivelise iintshatsheli ezinkulu kubandakanya:
IPancho Villa, iFlash Elorde, iLittle Dado, iGerry Penaloso, uLuisito Espinosa, uBen Villaflor, uMalcolm Tunacao, uRolando Navarette noManny Pacquiao zezinye zeenkwenkwezi.
U-Abraham Mitra engayeki umsebenzi kunye nothando lomdlalo wamanqindi kunye noluntu lwalubalulekile ngexesha elinzima ngexesha lobhubhane njengoko wayekhokela ngomzekelo ngokuphumeza iiprotokholi ngenkxaso ye-WBC yokuvula iiholo zemithambo kunye nokuvumela umlo wamanqindi ukuba enze umsebenzi ngexesha elinzima kakhulu.
I-GAB ikwamisele isohlwayo esiqatha kwabo bazama ukuxhaphaza iimbethi manqindi phesheya kwaye iphumeze imigaqo-nkqubo yolawulo engumzekelo yokukhusela abo bangathathi ntweni.
I-GAB phantsi kobunkokheli buka-Abraham Mitra yathathelwa ingqalelo yi-WBC njengeKhomishini yomdlalo wamanqindi yonyaka yokuphumeza iimviwo zonyango zasimahla kubo bonke abadlali bamanqindi ngaphambi kokunikwa ilayisensi.
UGilberto "Zurdo" Ramirez Ukujolisa kuArtur Beterbiev kunye noDmitry Bivol
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGilberto Ramirez	0
Owayesakuba yintshatsheli ye-superweight world UGilberto "Zurdo" uRamirez (41-0, 27 KOs) kukuzingela kwaye iithagethi zakhe zingoyiswa ngamaRussia, UArtur Beterbiev kwaye NguDmitry Bivol, ngokulandelanayo, i-WBC / IBF kunye ne-WBA Super intshatsheli yelizwe elinzima.
URamirez oneminyaka engama-29, osandula ukutyikitya ikhontrakthi ekhethekileyo yokukhuthaza kunye Oscar De La HoyaIGolden Boy Promotions, ikwindawo yesi-4 no-5 ngokulandelelana, yi-WBA ne-WBO.
URamirez wayengenamdla kumlo wamva nje ka-Beterbiev kwaye uyazibuza ukuba iphi i-Bivol kule minyaka ili-1 idlulileyo, kuba ebengekho eringini.
Kumlo wakhe wokuqala kwiintsuku ezingama-519 (nge-Okthobha ye-12, 2019), uBeterbiev ubonakalise umhlwa kunye nokuba neminyaka engama-36 (10) ngexesha lakhe le-XNUMXth ujikelezo lwenkqonkqozo lobuchwephesha kumchasi wakhe waseJamani ongaziwayo, UAdam Deines (19-2-1, 10 zeeKO). Ngoku, uBeterbiev uthetha ngomlo olandelayo ophumeleleyo nge-10 ka-Eprelith UJoe Smith, Omnci. (26-3, 21 KOs) xa kuthelekiswa UMax Vlasov (45-3, 26 KOs) ngo-Epreli 10th Isihloko secandelo le-WBO elingenamntu elili-175. UVlasov, ngequbuliso, woyiswa nguRamirez ngesigqibo esi-10 sokujikeleza ngo-2015.
"Ndilindele lukhulu kuye (uBererbiev)," utshilo uRamirez malunga nokulwa kukaBeterbiev noDeines. “Ndicinga ukuba ujongeka ethe tyaba kwaye buthuntu kuninzi lomlo. Kumnandi kuye ukuba abambe ibhanti okwethutyana, kodwa kufuneka azi ukuba ndize kuzo zonke izixhobo zekhompyutha kwaye ndiza kubuyisa amawonga kubantu bam eMexico. ”
I-Bivol ayiphosanga punch ngexesha lomlo kwiinyanga ezili-17, okoko waphumelela isigqibo-ngamacala ali-12 ULenin Castillo. Endaweni yokubuyela ngokuchasene "negama" elilwela ukukhusela isihloko sakhe seWBA Super, iBivol izakubuya ngoMeyi 1st eLondon ngokuchasene nomntu ogama lingu UCraig "Spider" Richards 16-1-1, 9 KOs), i-WBA No. 8-ilinganise ubunzima obunzima obungazange bulwe ngaphandle kwe-United Kingdom.
"Ndihlala ndisithi uDmitry Bivol wayengoyena mceli mngeni ungaphaya," wongeze watsho uRamirez, "yiyo loo nto ndifuna ukwenza lo mlo ukuba uqhubeke. Ndiyazi ukuba uzokulwa kwaye ndiyathemba ukuba uza kuhlala engoyiswanga ukuze senze umlo omkhulu kweli hlobo. ”
UJamel Hering vs Carl Frampton ngalo Mgqibelo eDubai kwisihloko seWBO
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UCarl Frampton, UFrampton vs. Hering, UJamel Hering	0
UJamel Herring ufuna ukuqhubeka nelifa lokumela oomkhosi baselwandle kumdlalo wamanqindi xa ekhusela isihloko sakhe se-WBO super-featherweight ngokuchasene noCarl Frampton kule mpelaveki. Bukela umlo bukhoma kwi-ESPN +
Umnyhadala we-D4G Promotions wenzeka eKesars Palace Palace eDubai ngoMgqibelo, njengoko uHering (22-2, 10 KOs) ebeka ibhanti lakhe kumgca ngokuchasene neFrampton (28-2, 16 KOs), ngowuphi owona mlo mkhulu owakha wenzeka. kwingingqi.
U-Hering ujoyine kwii-Marines ngo-2003 kwaye wakhonza iindwendwe ezimbini zomsebenzi e-Iraq, kwaye ubonakalisile ukuba oko kuye kwamnceda njani ukumisela eli dabi lembali.
UHering uthe: “Ndifuna ukwaziwa njengelinye lawona majoni aphambili ukuba ndimele umdlalo wamanqindi, kwaye ndiqhubeke nesiko lolwandle emanqindini.
“Ukuba kulo mdlalo kuyintsikelelo, ngakumbi kweli nqanaba, njengoko ndikhe ndanzima kakhulu. Ndijongene nokuthunyelwa kabini, kwaye ndilahlekelwe lusapho kunye nabahlobo.
"Ndihlala ndifuna ukuba yinxalenye yento ekhethekileyo, kwaye ndiziva ndinokuninzi kakhulu ukungqina. Ukuphumelela kulo mlo kundivulela iingcango ezininzi zokulwa ixesha elizayo.
“Ndihleli ndingumntu othanda uCarl. Wayebizwa ngokuba nguMlobi woNyaka ngaxa lithile, kwaye uyazi ukuba kuthatha ntoni ukuphumelela umlo wokulwa isihloko. Ufuna ukwenza imbali, kwaye ilifa lakhe sele lityaliwe.
"Khange awudinge lo mlo, njengoko ukuphumelela ukuphumelela okanye ukutsala uzakuhla njengeyona ibalaseleyo, kodwa ukuphumelela apha kum kundomeleza njengentshatsheli esemthethweni ye-super-featherweight."
UCARL FRAMPTON: ANDINAKULINDA UKWENZA IMBALI!
UCarl Frampton ufunge ukuba uza kungena ezincwadini zembali ngokoyisa uJamel Herring ukuphumelela iwonga le-WBO super-featherweight kule mpelaveki ibalulekileyo e #Legacy eDubai.
Umnyhadala we-D4G Promotions wenzeka eKesars Palace Palace eDubai ngoMgqibelo, njengoko uFrampton (28-2, 16 KOs) ekugqibeleni efumana ithuba lokungena eringini noHering (22-2, 10 KOs), ngowuphi owona mlo mkhulu eyenzeka rhoqo kwingingqi.
Ukuphumelela kukaJackal kuya kumbona esiba yintshatsheli enobunzima obuthathu, kwaye iqhawe laseBelfast lizimisele ukubamba ithuba.
UFrampton wathi: “Umlo ekugqibeleni ufikile. Ndonwabile kakhulu kukuba kunje kungumlo ekuthethwe ngawo ngaphezulu konyaka.
“Ngumlo omkhulu lo kwaye undinika ithuba lokuba ndibesisiqithi saseIreland sobuntshatsheli behlabathi obunobunzima obuthathu kuphela, kwaye ndingoyena mntu waseBritane owenze njalo. Ndiyenzile ngendlela enzima nam, njengoko ndibethe intshatsheli yokuphumelela zonke iimbasa zam zehlabathi.
“Ndiyamhlonipha kakhulu uJamel Hering, njengendoda nanjengomphumi-mkhosi, kodwa ndiyazithemba ngokupheleleyo ukuba ndiza kumbetha lo mfo. Uhlala uzithembile kuwo wonke umlo, kodwa ndiziva ngathi le yenzelwe ukuba yenzeke kwaye yenzelwe ukuba yenzeke. Andizumvumela ukuba ayikhulule kum.
“Ndizakwenza nantoni na ukuze siphakamise isandla sam ekupheleni komlo. UJamel uza kuyilungela le nto, kodwa nam, kwaye andinakulinda ndenze imbali. ”
Kwenye indawo kumsitho wangoMgqibelo, uZhankosh Turarov kunye noTyrone McKenna badibana kwi-WBO Intercontinental isihloko esine-lightweight, u-American prodigy Keyshawn Davis ujongene no-Richman Ashelley, intshatsheli ye-weight-weight world uDonnie Nietes ungqubana no-Pablo Carillo kwi-WBO International isihloko se-super-flyweight isihloko, Kazakhstan Imvakalelo uTursynbay Kulakhmet ukhusela isihloko sakhe se-WBC International super-welterweight ngokuchasene ne-20-0 kumchasi uHeber Rondon, kunye neenkwenkwezi zalapha ekhaya uFaizan Anwar noFahad Al Bloushi.
UMarie-Eve Dicaire wafunda isifundo esixabisekileyo esivela kuClaressa Shields Fight
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UClaressa Shields, UMarie-Eve Dicaire, Amakhaka ngokuchasene neDicaire	0
Umdlalo wamanqindi odumileyo waseCanada UMarie-Eve Dicaire Ndifunde isifundo esibaluleke kakhulu nangona sidanisayo in Ukuphulukana nesigqibo kwihlabathi eliphambili ngoku elinobunzima be-welterweight UClaressa Shields (11-0, 2 KOs) ngoMatshi 3rd “SUPERWOMEN” isiganeko sokuhlawulwa kwemboniselo nganye.
UDicaire (17-1) waphulukana nelahleko yakhe yokuqala njengobungcali nakumdlalo wamanqindi ohlala ukhokelela kwicala elinye okanye ngokuchaseneyo: ukufunda kumava onke kunye nokuphucula njengembethi manqindi okanye ukuqhubeka nokulwa njengentshatsheli yangaphambili yelizwe.
Kwiiveki ezimbini emva kokulwa kweShields, uMarie-Eve wayebuyile kuqeqesho, endaweni yokuzifaka kwilahleko yakhe yokuqala kwaye azisizele.
UDicaire wathi: “Kucacile ukuba ndafunda izinto ezininzi. Ndibuyele ejimini ngesicwangciso esifanelekileyo sokuthatha amanqindi kum kwelinye inqanaba. Ndizibonile izinto ezininzi, ezinye zilungile kwaye ezinye zimbi, kodwa ngokuqinisekileyo ziya kunceda ube ngumlobi opheleleyo.
“Emva kweeveki ezimbini ndiphumle, ndandinemali eyaneleyo. Kwakhona, kunyaka ophelileyo siye sazama indlela entsha yokusebenza. Ndiya kwindawo yokuzivocavoca uqeqesho olunzulu iiveki ezimbalwa, emva koko ndithathe iintsuku ezimbalwa ndiphumle. Le ndlela indizise kwelinye inqanaba, ke sigqibe kwelokuba sisebenze ngale ndlela kwinkampu yam ezayo, kuba ndiziva ndilungile eringini. Ndingumntu ogqithisileyo. Andikwazi ukuphumla xa ndisazi ukuba ndilahlekile. Ndidinga ukwenza umsebenzi wenziwe ukonwabela iholide eziyinyani. Ndiyazi ukuba ndiza kuphinda ndibekhona eringini kungekudala. ”
Ilahleko ekugqibeleni zikhokelela kutshintsho kodwa injongo kaDicaire yokuba yintshatsheli yehlabathi engenakuphikiswa ihlala injalo. Yintoni etshintshayo, nangona kunjalo, sisimbo sakhe, ubuncinci ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ngakumbi xa ucinga ukuba akanayo iknockout ngexesha lomsebenzi wakhe wobuchwephesha.
"Ndazalwa ndikulungele, ngoko ke kwakamsinya, ngcono," utshilo uDicaire ngokuphumelela elinye iwonga lehlabathi. “Ndifuna ukuba yintshatsheli emanyeneyo, engenakuphikiswa kwaye yiyo loo nto sele ndibuyile emsebenzini. Sisebenza ekuphuculeni obunye ubuthathaka bam obabungabalulekanga ngaphambili. Ndiza kusebenza ukuphucula amandla am kunye nokulwa ngaphakathi kule nkampu yoqeqesho. ”
UDicaire ukwafundile ukuba inkqubo yakhe yenkxaso ikhulile, ngokumangalisayo, kwanasemva kokubuyela umva kwirekhodi yakhe engoyiswanga.
"Ndicinga ukuba ndiza kujongana nelahleko ndedwa nosapho kunye nabahlobo abasenyongweni," uqukumbele watsho uDicaire, “kodwa ibikukuchasana ngqo. Andikaze ndibone nkxaso ingako ivela kubalandeli ngalo lonke ixesha lomsebenzi wam. Ingathi wonke umntu uyazi ukuba ndinayo yonke into efunekayo ukuze ube yintshatsheli yehlabathi kwakhona kwaye bakunye nam kolu hambo lutsha. ”
I-Gabriels-Lara Gaytán yokuLwela i-WBA yokuKhanya okuKhanyayo kweBelt
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	IGabriels vs.Gaytán, UHanna Gabriels, UMartha Lara Gaytán	0
UHanna Gabriels uza kujongana noMartha Lara Gaytán kwi-World Boxing Association (WBA) yeLight Heavyweight isihloko. Umlo uzakwenzeka nge-17 ka-Epreli e-Fiesta Casino eSan Jose, eCosta Rica.
UGabriels ungomnye weentshatsheli zombutho woovulindlela kwaye uphethe ibhanti ye-welterweight super, ukongeza ekubeni wayeyintshatsheli ye-welterweight ngaphambili kwaye wayelwela inqaku eliphakathi lokulwa neClaressa Shields.
KwiCosta Rican iyakuba ngumlo wakhe wokuqala ukusukela ngo-2019. Ukungasebenzi kwakhe kubangelwe kukwenzakala kwengalo kwaye kamva kubhubhane, kodwa ngoku ukulungele ukubuya azokungqina ukuba usengomnye wabalwi abaphambili kwihlabathi namhlanje. .
Uya kujongana noLara Gaytan, waseMexico onamava osele esilwele izihloko zengingqi kwaye ulilambele eli thuba legolide. Inzalelwane yaseAguascalientes ibizwa ngegama elithi "La Aguerrida Demoledor", uneminyaka engama-33 ubudala kwaye uneemfazwe ezingama-20 zobuchule phantsi kwebhanti lakhe.
AmaGabriels anerekhodi lama-20 aphumeleleyo, ilahleko ezi-2, ukuzoba oku-1, kunye nee-11 ze-KOs, ngelixa uLara Gaytan ephumelele i-11, ilahleko ezili-9, kunye nee-KO ezi-6 kwikhondo lakhe lomsebenzi
Iibhulorho zase-Ebanie: Ndiza kuba ligorha e-UK Xa ndibetha iCourtenay
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Iibhlorho ngokuchasene neCourtenay, Iibhulorho ze-Ebanie, UShannon Courtenay	0
'IBomber Blomber' yagxotha phambi kwengxabano yesihloko sehlabathi
U-Ebanie Bridges uthi uzokuhla 'njengegorha labantu' e-UK ukuba ubethe uShannon Courtenay waseWatford xa bexabana kwiWBA Bantamweight Isihloko somhlaba ngoMgqibelo ngo-Epreli 10, bahlala kwi-Sky Sports e-UK nakwi-DAZN e-US. namazwe nemimandla engaphezu kwama-200.
Iibhlorho zibhiyozele ukubuyela kwakhe kumsesane emva konyaka ngaphezulu kwamanqaku aphumeleleyo kuCarol Earl eSydney ekuqaleni kwale nyanga. Utitshala wezibalo ovela eNew South Wales uphumelele iijaji kwaye waqinisekisa ukuphumelela ngamxhelo-mnye ukuze andise ukungaphumeleli kwakhe kwimilo emihlanu, kubandakanya nokubethwa kabini.
'Ibhombu eBlonde' idibana 'noMntwana oBulala uBulala' kwikhadi elingaphantsi likaConor Benn nxamnye noSamuel Vargas, kwaye ngokwenza oko uba ngumlobi wokuqala wasetyhini waseAustralia oza kudlala kumdlalo weMatchroom, kwaye umntu oneminyaka engama-34 uthembisa Phawula umsitho ngokubeka isihloko sakhe sokuqala sehlabathi.
"Ngokuqinisekileyo ndijongelwa phantsi kodwa kulungile," utshilo uBridges. “Konke malunga nexabiso lothuswa. Yonke into endiyenzayo yenza iintloko, ndim kuphela. Ndinjalo ngendalo, kuyenzeka nje. Xa ndingena apho kwaye ndiphosa inqindi lokuqala lomlo, abantu baya kuhlala apho kwaye bayothuka kuba abanalo nofifi lokuba ndinokwazi ntoni. Andinguye umlweli weBarbie Boxercise.
"Ndiva ngathi ukuba ndingambetha uShannon Courtenay ndiza kuhla njengeqhawe e-UK kuba wonke umntu undibuza ukuba mandimkhuphe. Zonke ziyafana, 'hey ndingumBritane kwaye ndifuna nje ukuba umvale umlomo kwaye umgxothe ngenxa yokuba enekratshi. Kuyaphambana ukuba mangaphi imiyalezo endiyifumanayo. Ndiva ngathi kukho uxinzelelo oluninzi kum f ** k her up. Akukho mntu ubonakala umthanda phaya. Ukuba ndiphumelele, ndiza kuba ligorha.
“Andizukuya phambili kodwa ngoba ndiyazi ukuba uShannon yimbethi manqindi ebalaseleyo. Akazukuba lula. Andiyi kungena apho ndicinga ukuba oku kuya kuba yi-walkover. Andicingi njalo ngomntu. Ukuphulukana akuyiyo inketho, ndiza kufumana indlela. Ngaba izakuphatha le ndiyicholayo? Sobabini banezakhono, sobabini banezimbo ezithandekayo emehlweni.
“Ukuba akapheleli ekungqengqisweni, emva kokuphela komlo ubuso bakhe buzakuphela bukhangeleka ngathi ngunonkala otyunyuziweyo elityeni. Iya kuphazamiseka. Akayi kujonga ngokufanayo xa oku kugqityiwe. Ungene kukothuka ukuba ucinga ukuba ndinexhala lokujonga okuhle ezikalini. Xa ndiphumelela elo bhanti, ihlabathi liyimbatyisi yam. Izakuvula amathuba kuyo yonke indawo. ”
I-Courtenay vs Bridges yinxalenye yobusuku obukhulu besenzo ngo-Epreli 10, ukunyuka kwe-Welterweight Star Conor Benn (17-0, 11 KOs) ukhusela isihloko sakhe seWBA Continental ngokuchasene noSamuel Vargas (31-6-2, 14 KOs) Umnyhadala, uSavannah Marshall (9-0, 7 KOs) waseHartlepool wenza ukhuseleko lokuqala lweWBO Middleweight World Title ngokuchasene neChampion yaseYurophu uFemke Hermans (11-3, 4 KOs), Glasgow Bantamweight Kash Farooq (14-1, 6 KOs) ubuya emva kokuba i-masterclass iphumelele u-Angel Aviles kunye no-Takeley Super-Middleweight John 'The Gentleman' Hedges (1-0) ujonge ukwakha kwi-pro yakhe yokuphumelela u-Okthobha ophelileyo, ngemilo engakumbi eya kongezwa kungekudala.
I-MTK Global kunye neMiura kwi-Co-yokuKhuthaza iMiboniso eNkulu yaseMexico ngomhla we-16 ku-Epreli
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBrandon Romero, IMachado vs. Romero, I-Miura, mtk jikelele, UNeslan Machado	0
IMTK Global neMiura bonwabile ukubhengeza isiganeko esikhulu esenzeka eMonterrey, eMexico ngolwesiHlanu we-16 ku-Epreli.
Ikhadi elikhuthazwe ngokubambisana leMTK Fight Night liza kusasazwa ngqo e-US kwi-ESPN + ngokubambisana ne-Top Rank, kwi-ESPN Knockout eMexico naseLatin America, nakwihlabathi liphela kwi-IFL TV, kwaye ibona ezinye zeenkwenkwezi ezibalaseleyo ezivela eMexico nangaphaya umboniso.
UMiura yinyuselo ehlonitshwa kakhulu esekwe eMexico, kunye nabalwi abaliqela abazinzileyo, kunye nenamba yeembethi manqindi zeMTK Global, ezimiselwe ukukhuphisana ekhadini.
Kwisiganeko esiphambili, uNeslan Machado (17-0, 8 KOs) ongabethwanga, ubuya, ethatha uBrandon Romero (11-1-1, 6 KOs) kwimbambano ye-10-round super-featherweight.
Owayesakuba yintshatsheli u-Miguel Vazquez (42-10, 16 KOs) ubuyile, ejongene no-Alberto Morales kwimijikelo esibhozo kwi-super-lightweight, kunye nemvakalelo yokufikisa kulutsha uJonathan Lopez (2-0, 2 KOs) wenyuka ngokuchasene no-Omar Santillan (5-1) kwimpixano yobunzima bentshontsho emithandathu.
Abaselula abathembisayo uChristopher Florez (4-0, 4 KOs) kunye noRafael Armenta (2-0-1, 1 KO) bayasebenza nabo, bajikeleza isityalo esinetalente seenkwenkwezi zeMTK Global ezibekelwe ukukhuphisana kulo msitho.
Abadlali bakaMiura ekhadini baquka uChristian Uruzquieta (19-4-2, 7 KOs), okhusela isihloko sakhe seWBC International Silverweightweight ngokuchasene noMiguel Beltran (34-8, 23 KOs).
URonan Sanchez waseArgentina (5-0, 3 KOs) uthatha uMartin Eligio (7-2, 5 KOs) kumdlalo osisidudla, u-Ricardo Salas (15-1, 11 KOs) noCarlos Gorham (16-7 -1, 10 KOs) ngaphezulu kwemijikelo emithandathu kwi-welterweight, ngelixa uJimerr Espinosa (9-0, 8 KOs) noRoberto Acosta (15-1, 8 KOs) bobabini babuyela eringini.
Umphathi we-MTK Global ye-Latin American Operations uMariana Caballero uthe: “Kuyasivuyisa ukusebenzisana noMiura kulo msitho umhle eMonterrey ngo-Epreli 16. Kucacile ukuba uMiura uyayithanda inqindi njengoko sinjalo, kwaye siyathemba ukuba esi isisiqalo sobudlelwane obukhulu eMexico.
“Iinkwenkwezi zethu zeMTK Global uNeslan Machado, uMiguel Vazquez, uJonathan Lopez, uRafael Armenta kunye noChris Florez bonke bazakube besebenza kulo mthetho uyilwayo, kwaye abalandeli bazakubabona nabanye babalwi bakaMiura abanesiphiwo.
"IMexico ibiwuthanda umdlalo wamanqindi kwizizukulwana ngezizukulwana, kwaye sijonge phambili ekuziseni umsitho omkhulu phaya kwinyanga ezayo."
UManuel Garrido kaMiura wongeze: “Kuyasivuyisa ukudibana neMTK Global, eyona nkampani inkulu nehloniphekileyo kulawulo lomdlalo wamanqindi ehlabathini ukuzisa lo msitho eMonterrey nge-16 ka-Epreli.
“Apha eMiura siwazi kakuhle umba weembethi manqindi ezithembisayo nezizayo esinazo eMexico, kwaye sonwabile ukuba ngoku singabonisa izakhono zabo kubaphulaphuli ababanzi.
“Abalwi beMiura abanetalente uChristian Uruzquieta, uRonan Sanchez, uJimerr Espinosa, uRoberto Acosta kunye noRicardo Salas bazakuba sekhadini, kunye nezinye izitalato ezinomdla zeMTK Global.
"Lo ngumnyhadala ekufuneka ubonwe hayi eMexico kuphela kodwa kwihlabathi liphela, ngenxa yoko asinakulinda ukuhambisa umsitho omkhulu wokulwa abalandeli ngo-Epreli 16."
UTroy Williamson vs Kieran Smith Kwisihloko seBritish Eliminator nge-30 ka-Epreli
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	U-Kieran Smith, UTroy Williamson, UWillionon ngokuchasene noSmith	0
I-super-welterweights ezingabethwanga ziya kungqubana njengoko uTroy Williamson esiya kulwa no-Kieran Smith kumdlalo wokugqibela wokuphelisa isihloko seBritane ngo-Epreli 30.
Umlo wenzeka kumnyhadala weQueensberry Promotions obubanjelwe eCopper Box Arena eLondon, kwikhadi elingaphantsi kweMoruti Mthalane vs. Sunny Edwards isihloko somlo silwa ngqo kwi-BT Sport, ekwabonisa ukubuya okulindelwe kakhulu kukaMichael Conlan njengoko ejongene Ionut Baluta.
U-Williamson (15-0-1, 11 KOs) ubuyile emva kokuphumelela uHarry Scarff emva ngo-Agasti, ngelixa uSmith (16-0, 7 KOs) ebuya emva kokuphumelela kwakhe uVincenzo Bevilacqua ngo-Novemba ngo-2019.
U-Williamson wathi: “Ungumlo olungileyo kwaye ulwe kakuhle. Inye ndiyithatha kakhulu kwaye andinakulinda ukuba ibhola iqengqeleke.
“Ngumlo omkhulu, kuninzi okusemngciphekweni wokuphelisa iBritane, kwaye kukho inyama encinci emva kwayo kuba ndambetha njenge-amateur phaya ngonyaka ka-2015. kwaye kwakungumlo osondeleleneyo ke kukho isuntswana lembali apho.
“Andikhange ndibubone ubuninzi bekhondo lakhe lobuchwephesha kodwa ndiyazi ukuba ubekwe ngaphezulu kwam kumanqaku eBoxrec kwaye ndiyamhlonipha njengomlwi. Ndiyavuma naye ukuba uthintelwe kodwa ndicinga ukuba ndim. Esi iza kuba sisiqalo nje nalapho ndizakuzibhengeza khona eqongeni. ”
USmith uthe: “Ndonwabe kakhulu ukubuyela umlo omkhulu, kunye nomboniso omkhulu kwi-BT Sport. Iinyanga zokugqibela ze-18 bezindikhathaza njengoko kuye kwabaninzi, kodwa ndilapha ngoku kwaye ndikulungele ukukhaba.
“Ilihlazo into yokuba singangenisi abalandeli kule kodwa ndiqhele ukuqhela kwiiholo ezingenanto nanjengoko sonke besenza njengabadlali kumaqela esizwe kwihlabathi liphela.
“Ngoku lo msuseli wokugqibela wethamsanqa kwitayitile yaseBritane, icebo kukuphumelela le nto kwaye uqhubeke naloo bhanti. Icandelo le-super-welterweight liyachuma okwangoku kwaye zininzi kakhulu iimilo zasekhaya. Linyathelo nje elinye ngexesha, eyona nto ndijolise kuyo kukubetha uTroy. ”
UMateyu Tapia kunye noPaul Fleming bafumana i-Big Stoppage Wins e-Australia
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UMateyu Tapia, UPaul Fleming, I-Tapia kunye neFleming	0
Kubekho uloyiso olunomdla lokumisa u-Mateo Tapia kunye noPaul Fleming ngolwe-Lwesithathu, njengoko esi sibini siphumelele umlo waso e-Australia.
Iinkwenkwezi ezimbini ezingoyiswanga zase-Australia beziyinxalenye yomsitho omkhulu eNewcastle Entertainment Centre eNew South Wales, kwikhadi eliphantsi le-WBO Global super-welterweight fight phakathi kukaTim Tszyu noDennis Hogan.
UTapia (13-0, 8 KOs) wayeyokulwa noRenold Quinlan (12-8, 8 KOs), kwaye yayiyeyona nto ibalulekileyo eyenziwa ngumntwana oneminyaka engama-22, njengoko wayeyekile uQuinlan kumjikelo wesine ukuphumelela umntu ongenamntu Isihloko se-WBA Oceania super-middleweight.
Kwakunomtsalane ngokulinganayo kwintsebenzo evela kuFleming (27-0-1, 18 KOs), efumana uloyiso kwiTyson Lantry (8-4, 3 KOs) emva kokuba ikona kaLantry yaphosa itawuli kumjikelo wesixhenxe.
UTim Tszyu woyisa uDennis Hogan kunye neZiphumo eziPheleleyo zeManqindi ezivela e-Australia
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UMnyama uDryden, UDennis Hogan, Ulwalamano lweLoiterton, UJason Fawcett, UJason Medawar, UKoen Mazoudier, Linn Isiphepho, UMateyu Tapia, UPaul Fleming, URenold Quinlan, USakio Bika, USam Soliman, UTim Tszyu, Tszyu vs. Hogan, Iilitha zeTyson, UWade Ryan	0
IZiko loLonwabo laseNewcastle eNewcastle, eNSW, e-Australia
UTim Tszyu (18-0, 14 iiKO) W I-RSF 5 UDennis Hogan (28-4-1, 7 zeeKO)
(Isihloko seWBO Light Middleweight Global Title)
Amanqaku okulwa: UHogan wayephantsi kumjikelo we-5 ukusuka kwi-uppercut. Wavuka ekunkqonkqozeni kodwa wathatha isohlwayo esingakumbi de ikona yakhe yaphosa itawuli ngexesha le-2: 29 yomjikelo wesi-5.
UWade Ryan (18-9, 5 iiKO) W TKO 10 UKoen Mazoudier (8-2, 4 iiKO)
(IWBA Oceania Isihloko se-Super Welterweight)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-2:30 kumjikelo we-10.
UPaul Fleming (27-0-1, 18 zeeKO) W TKO 7 Iilitha zeTyson (8-4, 3 iiKO)
(I-WBA Oceania Super Featherweight Isihloko seMpuma / saseNtshona)
Amanqaku okulwa: Ixesha lokumiswa yayingu-0: 10 xa ikona yeLantry yaphosa itawuli.
Sakio "Scorpion" Bika (35-7-3, 22 zeeKO) I-PTS UD 8 USam “King” Soliman (46-15-1, 19 zeeKO)
(165lb Ukubamba Ubunzima)
Amanqaku okulwa: Amanqaku angama-80-73, 79-73, 78-74.
UMateyu Tapia (13-0, 8 iiKO) W TKO 4 URenold Quinlan (12-8, 8 iiKO)
(Isihloko seWBA Oceania Super Middleweight)
Amanqaku okulwa: UQuinlan wayephantsi kumjikelo 4. Ixesha lokumiswa yayingu-1: 44 kumjikelo we-4.
UMnyama uDryden (4-0, 4 iiKO) W TKO 2 UJason Medawar (I-1-0, 1 KO)
UJason Fawcett I-PTS 4 UAlex Carioti
Amanqaku okulwa: I-Carioti yayisezantsi kumjikelo wesi-3. Omabini la majoni ayesenza amadrug pro.
Linn Isiphepho (1-1) I-PTS 4 Ulwalamano lweLoiterton (0-1)
Miguel Cotto vs.Juan Manuel Marquez PPV Umboniso we-12 kaJuni
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UJuan Manuel Marquez, IMarquez kunye neCotto, Miguel Cotto	0
kunye UJuan Manuel Marquez wagqibela ukuringa ngo-2014 kunye noMiguel Cotto ngo-2017, esi sibini siza kudibana kumboniso we-PPV ngomhla we-12 kuJuni kwindawo eza kubhengezwa.
Isibhengezo siya kwenziwa ngeenkcukacha ezongezelelweyo nge-5 ka-Epreli.
Isiteshi 5 ukusasaza uJamel Hering vs Carl Frampton ngoMgqibelo
Umlo weWBO super-featherweight umlo phakathi kukaJamel Hering kunye noCarl Frampton uzakusasazwa ngqo kwiChannel 5 e-UK naseIreland.
Oko kuthetha ukuba izigidi zabalandeli ziya kuba nethuba lokuzibonela lo msitho kufuneka wenziwe, owenzeka eKesars Bluewaters Dubai ngoMgqibelo.
Umlo ubizwa ngokuba 'lilifa,' njengoko uFrampton (28-2, 16 KOs) ejonge ukuba sisiqithi seentshatsheli zokuqala ezinobunzima behlabathi eIreland ngokoyisa uHering (22-2, 10 KOs).
UHering wenza ukhuseleko lwesithathu lwenqaku lakhe lehlabathi, njengoko ejonge ekoyiseni u-Jonathan Oquendo, uLamont Roach kunye noMasayuki Ito.
U-Eddy Reynoso: "Umlo kaCanelo noSaunders uza kuba yiToughie"
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBilly Joe Saunders, ICanelo vs.Saunders, USawule Alvarez	0
Intshatsheli ye-World Boxing Council ye-supermiddleweight intshatsheli uSaul 'Canelo' Álvarez, uthabathe inxaxheba kwimbaleki ye-WBO, uBilly Joe Saunders, nge-8 kaMeyi kwibala le-AT & T e-Arlington, eTexas.
Umqeqeshi u-Eddy Reynoso, onomsebenzi omde kunye ophumeleleyo osebenza noCanelo, uphawule wathi: “Umlo neSaunders uzakuba nzima ngenene. Usebenza kakuhle imilenze yakhe. Uphosa indibaniselwano elungileyo kwaye ukhuselekile. Uza kuba ngumlo ogqwesileyo. ”
UCanelo (55-1-2, 37 KOs) wenza ixesha elilahlekileyo, esilwela ixesha lesithathu kwiinyanga ezintlanu emva kokubekwa etroneni kukaCallum Smith ngoDisemba kunye no-Avni Yildirim ngoFebruwari.
USaunders (30-0, 14 KOs) kumlo wakhe wamva nje woyisa ummi wasekhaya uMartin Murray kuDisemba ophelileyo.
UCanelo uphawule wathi: “Uyimbethi manqindi elungileyo. Ulwa nzima kwaye ngasekhohlo, kodwa siyakulungela yena. Ndikhuthazeke kakhulu kukuphumelela. ”
UJosé Zepeda ulungiselela ukukhusela isihloko ngokuchasene nePedro Campa ngoMeyi wama-22
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UJosé Zepeda, UPedro Campa, Zepeda vs. Campa	0
Isibindi saseMexico uJosé Zepeda (33-2, 26 KOs, 2 NC) uza kuyikhusela intshinga yakhe enzima yeWorld Boxing Council ngeSilver isihloko esilula, ngokuchasene nomlingane wakhe uPedro Campa (32-1-1, 21 KOs), ngoMeyi 22 eLas Vegas , kwikhadi elifanayo eliza kukhokelela uJosé Ramírez noJosh Taylor.
UZepeda uphumelele umdlalo obalaseleyo, ngokubetha u-Ivan Baranchyk kumjikelo wesihlanu ngo-Okthobha i-9 kwiziko leNkomfa eNkulu ye-MGM eLas Vegas.
Lo mlo wawuquka ii-knockdown ezisibhozo zizonke. UZepeda ngandlel 'ithile usindile kwi-knockdown ezimbini kumjikelo wokuqala kunye nokubethwa enye nganye kumjikelo wesibini nowesihlanu ukoyisa ngokuqinisekileyo iBaranchyk enesibindi ukuya kumjikelo wesihlanu.
UCampa, 29, uvumile ngasekupheleni konyaka ophelileyo ukuba alwe noAdrien Broner kumnyhadala ophambili we "Showtime Championship Boxing" ngoFebruwari 20 e-Mohegan Sun Arena e-Uncasville, eConnecticut. Nangona kunjalo, elinye lamalungu eqela likaCampa lafumana ikhontrakthi ye-COVID-19 kwaye wanyanzelwa ukuba arhoxe kuloo mfazwe ekuqaleni kukaJanuwari.
I-Campa yi-5-0-1 okoko waphulukana nokuphulukana nomsebenzi wakhe, kumjikelo wesixhenxe we-TKO ngokuchasene nomntu wasekhaya uCarlos Jiménez ngo-Okthobha ka-2017 eCuernavaca, eMexico.
I-ESPN iya kusasaza ikhadi eliveliswe liGosa eliPhezulu.
USlimmer uAndy Ruiz akanakulinda Alight kwiRingi noChris Arreola
Intshatsheli yokuqala yaseMexico enobunzima obukhulu, uAndy Ruíz, uzakubuyela eringini emva kwenyanga elishumi elinesixhenxe, eyokulwa noChris Arreola, nge-17 kaMeyi eDignity Health Sports Park eCarson, California.
Emva kweenyanga kugxilwe kwindawo yokuzivocavoca, kunciphile, kulungisiwe kwaye kukhokelwa ngocoselelo ngumqeqeshi uEddy Reynoso, uAndy ukulungele ukubuyela kwiindlela zokuphumelela, emva kokuphulukana no-Anthony Joshua ngoDisemba 2019.
“Andinakulinda ndibuyele eringini. Ukuziqeqesha noEddy kwindawo yokuzivocavoca kuye kwamangalisa. Ndirhangqwe ngamajoni amakhulu, ngakumbi uCanelo Álvarez kwaye sibeka umsebenzi, ukuba ubengcono kunangaphambili. Ndiyamazi uChris Arreola okoko ndaguquka. Ndiza kuba krelekrele kwaye ndikulungele ukuzibuyisela endaweni yokuba yintshatsheli yehlabathi, ”wafunga watsho uAndy.
Kwelakhe icala, u-Arreola, ongakhange alwe ukusukela ngo-2019, uphawule wathi: “Senza konke okusemandleni ukuze xa sidibana noRuiz, abalandeli bonwabele umlo ophakathi kwabona bantu babalaseleyo baseMexico naseMelika. Ndizimisele ukuphumelela, ”wagxininisa uNightmare Arreola.
30 EyoKwindla 2021
UTibo Monabesa vs Toto Landero kwi-WBC International Title ngo-Epreli 10
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Monabesa vs. Landero, UTibo Monabesa, UToto Landero	0
U-Indonesia u-Tibo Monabesa uzokulwa ne-Toto Landero yase-Filipino kwitayitile ye-flyweight yelizwe engenamntu kwi-World Boxing Council, ngomhla we-10 ku-Epreli eJakarta, kumnyhadala owakhuthazwa ngu-Armin Tan.
Ngaphezulu konyaka ophelileyo, iMonabesa (20-1-2, 8 Kos) yoyisa u-Omari Kimweri wase-Australia ngokuphumelela kwisigqibo.
Ngokuchasene nabadlali bakwiiPhilippines, iMonabesa iphumelele ama-5 kunye nokuzoba ngelixa uToto Landero (11--4-2, 2 KOs) ebenomsebenzi omangalisayo kumlo wakhe wokugqibela nxamnye nelizwe lakhe uJoel Lino. Olunye lolona loyiso lubalaseleyo lwaluchasene neentshatsheli zehlabathi uVictorio Saludar.
Ngale mini: UWayne McCullough Ukhusele iTayitile ngokuchasene noJose Luis Bueno
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UJose Luis Bueno, McCullough vs Bueno, UWayne McCullough	0
Matshi 30th, 1996
Kwisigqibo esathathwa njengesigqibo esiphikisayo, uWayne McCullough, waseMantla eIreland, wasigcina isihloko sakhe seWBC bantamweight ngesigqibo sokwahlulahlula uMexico uJose Luis Bueno. Umlo wenzeka e-The Point eDublin, eIreland. Indoda yesithathu kwiringi yayinguLou Filippo. Abagwebi yayinguLazaro Carrasco, uMarty Sammon noRolando Barrovecchio. URolando uvotele umceli mngeni.
I-Fighter Locker Inks 2016 ye-Olimpiki yesilivere iMedalist uYuberjen Martinez
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Umlo wokulwa, URyan Roach, Yuberjen Martinez	0
I-Fighter Locker kaRyan Roach ityikitye imbasa yesilivere yeOlimpiki yowama-2016 Yuberjen Martinez kwisivumelwano esikhethekileyo sokuphatha.
Umntu oneminyaka engama-29 ubudala waseColombia okhanyayo we-flyweight une-7-0 (2 KOs) irekhodi kwi-World Series of Boxing.
"Emva kokuba nomsebenzi omnandi we-amateur," u-Martinez uxele, "sithathe isigqibo sokuya pro kwaye sayina ikhontrakthi yokulawula kunye ne-Fighter Locker. Ndisazimisele ukumela ilizwe lam kwakhona kwii-Olimpiki kulo nyaka eTokyo. Kuluyolo kum ukusayina neFighter Locker kunye noRyan Roach, ovela kusapho lomdlalo wamanqindi wesiko. Ndiqinisekile ukuba olu tshintsho lutsha lomsebenzi luya kuphumelela.
“Ndifuna ukubulela bonke abo bandixhasileyo njengembethi manqindi engahlawulwayo kwaye ndililungu leQela laseColombia. Ndifunde okuninzi kwaye ndibeka igama lelizwe, iColombia, phezulu ngoqeqesho. Ndiza kuqhubeka nokuthembela kwinkxaso yabo eqhubekayo kuyo yonke imisebenzi yam yobungcali. ”
UMartinez waphulukana nokhuphiswano lokugqibela lweeOlimpiki zika-2016 ngamanqaku UHassanboy Dusmatov, waseUzbekistan, eRio De Janeiro, eBrazil.
Ukongeza ekuphumeleleni imbasa yesilivere kwiMidlalo yeOlimpiki yowama-2016 eBrazil, uMartinez wayeyimbasa yebronze kwi-2017 World Amateur Championships eHamburg eJamani. Amanye amanqaku akhe abalulekileyo emidlalo yamanqindi aquka imbasa yegolide kwimidlalo yaseMzantsi Melika ka-2018, isilivere kwiMidlalo yasePan American ngo-2019 eBrazil, kunye negolide nesilivere ngokwahlukeneyo, kwimidlalo yango-2018 nango-2014 eMelika eseCaribbean.
"Ndityikitye uninzi lwabafundi abaphambili kumacandelo abo, kodwa akukho namnye owahonjiswa njengoYuberjen," umphathi omtsha kaMartinez URyan Roach utshilo. “Eli lithuba elikhethekileyo nanjengoko ebuyela kwi-Olimpiki kwaye wathandwa ukuba afumane imbasa kwakhona. Ngokwenene ulwa ngokukhethekileyo: ukhawulezile, womelele kwaye akayeki. Nje ukuba agqibe iOlimpiki, siya kulungela ukusebenza kwaye sigxile kwinqanaba lezakhono. Ndicinga ukuba ithetha ngokubanzi kwinkampani yam kunye nodumo lwam lokusayina umlweli obalaseleyo onokuthi asayine ngaphambili kunye nabanye abaphathi. Ulongezo olukhulu kusapho lwethu lomlo eFighter Locker. ”
I-Fighter Locker ekhulayo ngokuzinzileyo kweembethi manqindi ezinesiphiwo kubandakanya iCalifornia super flyweight URocco "Ke uCal Kid" uSantomauro (21-1, 6 KOs), iTroy, NY ABF yaseMelika eNtshona engasindi kakhulu URay Jay "Umonakalisi" uBermudez (12-0, 9 KOs), Toronto, Canada welterweight West Haven, CT super welterweight UJimmy "Isiqhwithi Sokuthula" Williams (16-5-2, 5 KOs), ubunzima obukhulu obuphakathi "Omangalisayo" uShawn McCalman (I-7-0, i-4 KOs), i-Army yase-US ephezulu UDaniel Bailey, Omnci. (3-0, 2 KOs), ayisindi ULeonel de los Santos (2-0, 2 iiKO), a Ixesha le-2 iDominican Republic iOlimpiki, iBoston featherweight UTroy Anderson, Omnci. (1-0, 1 KO), pro-debuting I-Dominican Republic i-welterweight UJuan Solano, kunye neSalt Lake City, abazalwana base-Utah, abakhulu kakhulu UIgnacio Chairez (8-0-1, 5 KOs) kunye nobunzima UGabriel Chairez (I-3-0-1, ii-2 zeeKO).